လူမှုကွန်ရက်တွေက သင့်အတွက် ဆေးလား၊ ဘေးလား? - YOYARLAY Digital Media and News
လူမှုကွန်ရက်တွေက သင့်အတွက် ဆေးလား၊ ဘေးလား?
Published: March 3, 20185:27 am Updated: August 9, 20199:37 am
နည်းပညာတွေ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာချိန်ကနေစလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လူမှုဘဝတွေဟာလည်း ပိုအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်လည်းပိုကျယ်ပြန့်လာသလို နေထိုင်မှုစနစ်တွေဟာလည်း ပိုအဆင့်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ခုဆိုရင် လူမှုကွန်ရက်တွေကို အသုံးပြုရင်း အိမ်ထဲကအလုပ်လုပ်လို့ရတာမျိုးတွေ၊ ဈေးဝယ်လို့ရတာမျိုးတွေနဲ့ အခြားအရာတွေကိုလည်း အိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုဘဲ လုပ်ဆောင်လို့ရနေတဲ့ခေတ်ကြီးကို ရောက်လာပါပြီ။ အစစအရာရာအဆင်ပြေလာတာနဲ့အမျှ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲခြင်းကိုလည်း စွဲလမ်းလာကြပါတယ်။ ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေကို ချိန်ဆကြည့်ကြရအောင်..
၁။ လူမှုကွန်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအတော်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ရှက်တတ်၊ ကြောက်တတ်ပြီး အပေါင်းအသင်းမဆန့်တဲ့ကလေးတွေတောင်မှ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးနားလည်မှုတွေ ပိုရှိလာပြီး လူသားဆန်မှုကို ပိုပြီးနားလည်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာတော့ ဒါတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အတုမြင်၊ အတတ်သင်ပြီး မကောင်းတာတွေကို အတုယူမှားလာတာမျိုး ၊ မိမိကိုယ်ကိုအချစ်လွန်လာတာတွေ၊ သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လို့ စိတ်ကျရောဂါအဆင့်ထိရောက်လာတာတွေစသဖြင့် အမျိုးမျိုးသောဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
၂။ လူမှုကွန်ယက်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးကို အများကြီးအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်ကနေတစ်ဆင့် ပညာသင်ကြားလို့ ရနိုင်တာတွေ၊ မော်ဒန်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လက်တွေ့နည်းပညာနဲ့ သဘောတရားတွေကို သင်ခန်းစာရယူနိုင်တာတွေနဲ့ မတူညီတဲ့အတွေးအမြင်သစ်တွေကို ဖော်ထုတ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာလည်း လူမှုကွန်ရက်တွေကတစ်ဆင့်ပဲ နည်းပညာတွေနဲ့ ပိုမိုအကျွမ်းဝင်လာပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်တွေက မူးယစ်ဆေးဝါးလို စွဲလမ်းတတ်စေတာကြောင့် မသုံးရမနေနိုင်သုံးပြီး ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာ အာရုံမရှိတော့ဘဲ လူမှုကွန်ရက်ကိုပဲ သုံးစွဲနေတာမျိုးက ဘယ်လိုအကျိုးမှမရှိနိုင်သလို တစ်ယာက်တည်း နေဖြစ်တာများတာကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်ဝေဒနာကို ခံစားရတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
၃။ လူမှုကွန်ရက်ကိုသာ အာရုံရောက်နေတာကြောင့် ကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်လာတတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ပဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်.. သင်စိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ထမင်း၊ဟင်းကိုတောင် စားဖို့မေ့သွားတာမျိုး၊ ဘာကိုမှထမလုပ်ဖြစ်တာမျိုး၊ ယုတ်စွအဆုံး အပေါ့အပါးတောင်မသွားတော့တာမျိုးတွေ ဒါတွေဖြစ်ဖူးပါသလား။ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်း ဒီလို effect တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို မျက်လုံးပွင့်တာနဲ့ Facebook ကိုသုံးလိုက်တာ ဘာမှမလုပ်ရ၊ မကိုင်ရပါဘဲ ညမိုးချုပ်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတောင်ရှိဖူးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အလွန်အကျွံစွဲလန်းနေတဲ့ပြဿနာပါ။ ဒီအပေါ်မှာပဲ အာရုံရှိနေတော့ တခြားဘာကိုမှအာရုံမစိုက်မိတော့ဘဲ အိပ်ချိန်၊စားချိန်မမှန်တာမျိုးကြောင့် ကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်လာတတ်ပါတယ်။
အရာရာတိုင်းမှာကောင်းခြင်း၊ဆိုးခြင်းတွေကဒွန်တွဲနေလေ့ရှိပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲခြင်းကလည်းဒီလိုပါပဲ။ သုံးတတ်ရင် ဆေးဖြစ်ပြီး မသုံးတတ်ရင်တော့ဘေးပါ။ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေကို ချိန်ထိုးကြည့်ရင်း လူမှုကွန်ရက်တွေကိုလည်း ကိုယ့်အတွက် ဆေးအဖြစ်သုံးစွဲနိုင်ကြပါစေ…
Angelic Demon ( ရိုးရာလေး )
Previous Previous post: ပိတ်ရက်အတွင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်စရာ ဇာတ်ကားလေးများ
Next Next post: လည်ချောင်းခြောက်ပြီး လည်ချောင်းနာရတဲ့ အကြောင်းရင်း
တစ်ခါတုန်းက အသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာ ဘဝကိုအေးချမ်းအေးချမ်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းလို့နေကြပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူပြောတဲ့စကားတွေကို ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိတာကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ အကြားအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအမျိုးသားကြီးဟာ မိတ်ဆွေဆရာဝန်ဆီကိုသွားပြီး ဇနီးသည်ရဲ့ အကြားအာရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ …
Published: June 9, 20193:05 pm